တောင်းရမ်းစားသောက်နေသည့် လူရွှင်တော်ဟောင်းကြီး အတွက် ၀မ်းသာစရာသတင်း...! - Thadin
HomeNEWSတောင်းရမ်းစားသောက်နေသည့် လူရွှင်တော်ဟောင်းကြီး အတွက် ၀မ်းသာစရာသတင်း…!
တောင်းရမ်းစားသောက်နေသည့် လူရွှင်တော်ဟောင်းကြီး အတွက် ၀မ်းသာစရာသတင်း…!
March 15, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on တောင်းရမ်းစားသောက်နေသည့် လူရွှင်တော်ဟောင်းကြီး အတွက် ၀မ်းသာစရာသတင်း…!
တောင်းရမ်းစားသောက်နေသည့် လူရွှင်တော်ဟောင်းဦးတိုင်းကျော်ကို သဘင်အစည်းအရုံးက ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်မည်
မန္တလေးမြို့လယ်ကောင်တွင် တောင်းရမ်းစားသောက်နေသည့် လူရွှင်တော် ဦးတိုင်းကျော်ကို မန္တလေးသဘင်အစည်းအရုံးက ရှာဖွေတွေ့ ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံးက ကူညီစောင့်ရှောက်သွားမည်ဟု သိရသည်။
“သူ့ကိုတွေ့ပြီ၊ အခုရုံးရောက်ပြီဆိုတော့ ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲတိုင်ပင်ကြမယ်။ တိုင်းကျော်ကတော့ ဦးချစ်တို့သိတဲ့ တိုင်းကျော်မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူလည်းသဘင်မှာ လူရွှင်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် နာမည်တူမရှား လူတူမရှားဆိုသလိုပေါ့” ဟု မန္တလေးသဘင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချစ်စရာက ပြောသည်။
လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် မန္တလေးမှလူရွှင်တော်ကြီး ဦးတိုင်းကျော်တောင်းရမ်းစားသောက်နေသည်ကို ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း သဘင်လူမှုကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီက ချိတ်ဆက်ပြီး စုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ပြီး ယခုကဲ့သို့ ကူညီစောင့်ရှောက်ရန်စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“သူ့ကို ဘိုးဘွားရိပ်သာကိုပို့ရမှာလားဆိုတာကတော့ သူ့မှာလဲ ဇနီးရရှိသေးတယ် ကြားတယ် အဲဒီအတွက် အစ်မတို့ဘက်က ဘာကူညီပေးနိုင်လဲ အရင်ဆုံးစီစဉ်ရမယ်”ဟု ရန်ကုန်သဘင်အစည်းအရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်ပတ္တမြားကေခိုင် က ပြောသည်။
တောငျးရမျးစားသောကျနသေညျ့ လူရှငျတျောဟောငျးဦးတိုငျးကြျောကို သဘငျအစညျးအရုံးက ချေါယူစောငျ့ရှောကျမညျ
မန်တလေးမွို့လယျကောငျတှငျ တောငျးရမျးစားသောကျနသေညျ့ လူရှငျတျော ဦးတိုငျးကြျောကို မန်တလေးသဘငျအစညျးအရုံးက ရှာဖှတှေေ့ ရှိပွီး မွနျမာနိုငျငံသဘငျအစညျးအရုံးက ကူညီစောငျ့ရှောကျသှားမညျဟု သိရသညျ။
“သူ့ကိုတှပွေီ့၊ အခုရုံးရောကျပွီဆိုတော့ ဘာတှလေုပျပေးရမလဲတိုငျပငျကွမယျ။ တိုငျးကြျောကတော့ ဦးခဈြတို့သိတဲ့ တိုငျးကြျောမဟုတျဘူး။ ဒါပမေဲ့ သူလညျးသဘငျမှာ လူရှငျတျောတဈယောကျဖွဈတယျ နာမညျတူမရှား လူတူမရှားဆိုသလိုပေါ့” ဟု မန်တလေးသဘငျအစညျးအရုံး ဥက်ကဋ်ဌ ဦးခဈြစရာက ပွောသညျ။
လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမြားပျေါတှငျ မန်တလေးမှလူရှငျတျောကွီး ဦးတိုငျးကြျောတောငျးရမျးစားသောကျနသေညျကို ဖျောပွခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး သဘငျလူမှုကူညီစောငျ့ရှောကျရေးကျောမတီက ခြိတျဆကျပွီး စုံစမျးရှာဖှခေဲ့ပွီး ယခုကဲ့သို့ ကူညီစောငျ့ရှောကျရနျစီစဉျခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
“သူ့ကို ဘိုးဘှားရိပျသာကိုပို့ရမှာလားဆိုတာကတော့ သူ့မှာလဲ ဇနီးရရှိသေးတယျ ကွားတယျ အဲဒီအတှကျ အဈမတို့ဘကျက ဘာကူညီပေးနိုငျလဲ အရငျဆုံးစီစဉျရမယျ”ဟု ရနျကုနျသဘငျအစညျးအရုံးမှ တာဝနျရှိသူတဈဦးဖွဈသူ ဒျေါပတ်တမွားကခေိုငျ က ပွောသညျ။
This Year : 233896
Total views : 2720986